Qaar kamid ah waxgaradka gobolka Mudug oo beeniyey in Galkacyo laga diidey nidaamka Xisbiyada Pl. ( Dhegayso), – Radio Daljir
Febraayo 6, 2013 12:01 g 0
Galkacyo, Feb, 6-2013, Nabadoon Bashiir Maxamuud Dalmar oo kamid ah ?nabadoonada gobolka Mudug ayaa ?beeniyey in shir dhowaan Galkacyo ka dhacay lagu diidey nidaamka asxaabta badan ee Puntland ku talaabsatay.
Wuxuu sheegay in shirka lagu qabtay Galkacyo laga weeciyey qaabkii loogu tala galay isagoo sheegay in xubno ka kamid ah dadkii ka qayb galay shirkaasi ?ay jiho kale uga faa’iidaysteen shirka qabsoomidiisa.
Nabadoon Bashiir Maxamuud Dalmar wuxuu tilmaamay in dadka reer Galkacyo aysan kasoo horjeedin nidaamka dimuqraadiyada Puntland, isanoo intaas ku daray in dad dano gaar ah wataa ay majaro habaabinayaan qaar kamid ah shacabka ku dhaqan magaalada Galkacyo.
Hadalka nabadoonka ayaa yimid kadib markii dhowaan warbaahinta qaar kamid ahi ay baahiyeen war sheegaya in magaalada Galkacyo lagu qabtay kulan looga soo horjeedo nidaamka asxaabta badan ee Puntland.
Naajeeriya u gudubtay Fiinal, kaddib markii ay 4-1 kaga badisay Maali.